Rooba Arfaasaatti fayyadamuuf hojjetamuu qaba
Rooba Arfaasaatti fayyadamuuf hojjetamuu qaba Featured
BOI: Rooba Arfaasaatti fayyadamuuf qonnaan bultoonniifi gariin qonnaan bultootaa hojjechuu akka qaban Ejensiin Meetrooloojii Biyyaalessaa beeksise.
Kaaba baha biyyattii, keessattuu naannoo kibba Tigraayiifi lixa naannoo Amaaraatti roobni idileedhaan walitti dhiyaatu akka jiraatus ejensichi eerera. Dhiha biyyattiitti Beenishaanguul Gumuuz dabalatee rooba idilee kan argatan yammuu ta’u, naannoon Affaariifi Somaaleemmoo idileedhaa gadi akka argatan raagi jiru ni addeessa.
Kibbaafi kibbi dhiha biyyattii keessattuu naannoon Gujiifi Booranaa rooba idileefi idileedhaa ol kan argatan ta’a jedheera ejensichi.
Naannoleen rooba argatan ooyiruu isaanii qopheessuu akka qaban dhaamee, midhaan faca’aniifi maasirra jiraniif ammoo haala gaarii kan uumu ta’uu ibseera.
Ejensichi akka jedhutti, arfaasaa baranaatti balaan lolaa sodaatamu hinjiraatu.
Ministeerri Qonnaafi Qabeenya Uumamaa gamasaan, qonnaan bultoonni rooba argamu cimmisuun fayyadamuu akka qaban dhaamera. Haala qilleensaarratti odeeffannoon wayitawaa qonnaan bulaa qaqqabaa akka jirus eerameera.
Torban kana/This_Week 10488
Torban darbe/This_Month 96845
Guyyaa mara/All_Days 1435268